kupenga catz ...
mubvunzo kupenga catz ...
1 gore 11 ago #203 by PAYSON
Pane munhu mumwe ane kushanyira kupenga catz / saitek nenguva kuzodzosera kukopa emadziro vatyairi uye plugins? Ndinoona kunyange zviri nhau "hungu vose" chinhu, zvinhu vanoshanda kumeso zvichitevera kushanya ikoko. Ini pamwe vanofanira chete kuwana SPAD asi ndinonzwa ine izvozvo kwakaita vaduku quirks pachake.
1 gore 11 ago #204 by Gh0stRider203
I ndambozvibhadharira, nokutendeseka.
Ndaimbova Saitek x45 asi wangu wokupedzisira busted pamusoro Me>.> RAKANGE ndakawonekana pamusoro x55 musi ebay asi vakazoguma majorly outbid
1 gore 11 ago #209 by Kolijahc
x45 wako sei kuputsa? Just kuziva, dzangu hari vakabuda. Zvakanga yangu kufarira neherikoputa chimuti pashure Ndakatora matsime panze. Ndakanzwa zvakanga zvichiita kuti vavezve ane mashiripiti pfapfaidzo, I akaritenga asi ave asi kuedza. Ndichiri vakamirira dzakawanda mumagwa, ndakatanga trolling ebay uyewo. Ndawana CH tsvimbo unogona kuwana (fighterstick USB) nokuda kufanana $ 40USD, uye aifarira chinoramba chichingorerutsa mitemo USB for $ 60USD. All Ndinoda ndiye throttle uye ini vangafara.
Handina aiva nemhanza yakanaka pamwe x55 uye x56 pamusoro ebay. Chero nzira overpriced, kana unyengeri Pachikamu (chete tsvimbo uye kwete throttle ine zvose hushande kana vakutarisire) kana untested (uyo haana USB chengarava uye 30 nemasekonzi?)
Vanhu vazhinji vanoda kuvenga kwavari, asi mumwe yakanakisisa zveefa Ndaona ndiyo thrustmaster HOTAS X ($ 20USD), asi tsvaka rwebhuruu mumwe unova HOTAS 4 ($ 30USD). Ndinoita vakaroorana kukurumidza mods (drill munhu makomba vakaroorana kuti paracord mubato, uye akagura flange kumativi chitubu kugadziridzwa nepfundo kuti patsime bvisika pashure calibration nokuda helicopters) uye kuvapa kure neshamwari dzangu kuti vanoda kudzidza helicopters. anoita zvinoshamisa Laptop chimuti kamwe unogona kutakura damn chinhu nyore.
1 gore 11 ago #215 by PAYSON
Hi KC, handina aiva X-45, ndinofunga mashoko akaita Crossover. All I kumboziva nepfuma zviri Saitek kuti X-55 HOTAS kudzora hurongwa. Vanofanira kuva chinhu "aiwanzopiwa wokushanda". Kana ndaida chete kamuti uye dzimwe mabhatani ndingada kudzokera wangu Logitech Supreme, chinova zvose zvaunoda kana mutyairi ane ndege. Kana iwe (sezvo I) kuita chero kurwisana pamusoro vamwe zvakakomba AI, ipapo X-55 (kana 65) "kudzora mamiriro" ndiyo inopisa HOTAS tikiti.
1 gore 11 ago #217 by Gh0stRider203
tanga kure, akabvisa dzenyu nouya romukova elnaz ndine chokwadi zvakanga zvisiri Mazvokuda saka hapana pamakumbo kunhivi munda elnaz
handizivi chii zvose akaenda pamwe tsvimbo asi ini KUZIVA throttle chikamu busted apo ndakarasikirwa MY pachiyero uye ruoko rwangu akaburukira pamusoro mubato, mukakachurwa rugure.
CRAPPY magadzirirwo imwe throttle, kana ukabvunza Me ... ndakakwanisa kuita chinochechenya zvafa vachishandisa dzimwe yezvokurapa tepi asi unonyatsovaziva kuti havasi gonna nokusingaperi.
Pasina Kamuti Zvisinei, kuti throttle maturo. Mumwe chik Ndiri kushandisa rutanda, mangwana I kurinhonga kuti Squash kapukanana (chinhu chimwe ndinovenga MOST pamusoro furati vangu damn roaches. Ndava kunzi guta asi uyo zvakajeka chinhu chakanaka saka ndinofunga My NEXT kudanwa ndiko kuti County Health Dept)., I akarimisa shure pasi uye kurega kushanda. Ndinongova kufanana wtf? zvechokwadi?
1 gore 11 ago #218 by Gh0stRider203
PAYSON akanyora: Hi KC, handina aiva X-45, ndinofunga mashoko akaita Crossover. All I kumboziva nepfuma zviri Saitek kuti X-55 HOTAS kudzora hurongwa. Vanofanira kuva chinhu "aiwanzopiwa wokushanda". Kana ndaida chete kamuti uye dzimwe mabhatani ndingada kudzokera wangu Logitech Supreme, chinova zvose zvaunoda kana mutyairi ane ndege. Kana iwe (sezvo I) kuita chero kurwisana pamusoro vamwe zvakakomba AI, ipapo X-55 (kana 65) "kudzora mamiriro" ndiyo inopisa HOTAS tikiti.
Ya ona Handiiti yakawanda mhepo kuti mhepo kurwisa, asi ndinoda ose mabasa ari 55 sezvo ndichiri REGAI kunyanya kubhururuka jumbos ... ndine akanyatsorevesa kushandisa kuti kuroora bhatani ose elnaz
Sezvo ini zvakawanda ILS anosvika mazuva ano (I akashandiswa kuvenga ILS zvino ndinorida lol), ndinowanzogumbukira kuva nemudzimai setup kuti autopilot kuti chinja kubva GPS kuna NAV1 uye kubva Nav Aungaita. Ndinofunga pamusoro chete chinhu I here akashandisa kiibhodhi kuti kana ndaiva 45 akanga kutaura ATC, batidza / kubva apu, uye zvichida 1 kana 2 zvinhu zviduku elnaz
1 gore 11 ago #221 by PAYSON
OK! Ndinofanira kuva isiri Forum. ruregero Vakawanda .gtg